ကလိုရင်းပါသော ပိုလီအီသလင်း၊ Pvc စီမံဆောင်ရွက်ပေးသော အထောက်အကူများ၊ ပန်းချီ အမ်မြူရှင်း - Dehua
PVC ထုတ်ကုန်များအတွက် Chlorinated Polyethylene
သံလိုက်ထုတ်ကုန်များအတွက် Chlorinated Polyethylene
ရော်ဘာအတွက် ကလိုရင်းပါသော ပိုလီethylene
PVC extrusion ထုတ်ကုန်များအတွက် Acrylic Processing Aid
ဆေးထိုးပုံသွင်းခြင်း PVC ထုတ်ကုန်များအတွက် Acrylic Processing Aid
PVC အမြှုပ်ထွက်ပစ္စည်းများအတွက် Acrylic Processing Aid
ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ထုတ်ကုန်များအတွက် အက်ခရီလစ်လုပ်ဆောင်မှုအကူအညီ
PVC ထုတ်ကုန်များအတွက် ချောဆီ Acrylic လုပ်ဆောင်ခြင်းအကူအညီ
AS အစေး TR869
စက်မှုလက်မှု Coating Additives
ကလိုရင်းပြုထားသော ပိုလီဗီနိုင်းကလိုရိုက် (CPVC)
Anti Corrosive ပစ္စည်း
Polyurea Elastomer (SPUA) မှုတ်ဆေး၊
သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံမှာ anticorrosin ပစ္စည်း
အမြန်တုံ့ပြန်မှုဖြန်းဆေး polyurea ကြမ်းပြင်ပစ္စည်း
ရေတွင်ရှိသော သတ္တုဆေး emulsion အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုတည်း
ရေတွင်ရှိသော Metallic Paint Emulsion
Dual Component Waterborne Plastic နှင့် Rubber Paint Emulsion
ကလိုရင်းပါသော ပိုလီအေသလင်း (CPE)
PVC Calcium နှင့် Zinc Stabilizer
ဆေးသုတ်ခြင်း Emulsion & Anit Corrosive ပစ္စည်း
ရေတွင်ရှိသော ပလတ်စတစ်နှင့် ရော်ဘာသုတ်ခြင်း emulsion
Elastic Anti- Corrosive Material ၊
အမြန် Reactive Spray Polyurea ကြမ်းပြင်ပစ္စည်း
Industry Coating Additives တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Chlorinated Rubber (CR)၊ High Chlorinated Polyethylene (HCPE)၊ Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC)
1.Special corrosive anti paint : marine paint ၊container paint ၊ anti-corrosion primer paint ၊ pipe coating စသည်တို့။
2.Fire retardant paint၊ flame retardant ဆေး၊ သစ်သားနှင့် စတီးဖွဲ့စည်းပုံ အပြင်ဘက်အတွက် coating။
၃။အဆောက်အအုံအပေါ်ယံပိုင်း၊ အလှဆင်ထားသော အဆောက်အဦအပေါ်ယံပိုင်း၊ ကွန်ကရစ် အပြင်ဘက် primer ဆေး။
4. Road marking paint : လေဆိပ်အတွက် ပန်းချီ၊ လမ်းသွားလမ်းလာ အမှတ်အသား ဆေး၊ လမ်းကြောင်း အမှတ်အသား ဆေးနှင့် လမ်းအတွက် ရောင်ပြန်ဟပ်သော ဆေးများ။
5.Adhesive: PVC ပိုက် PVC ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ PVC ပရိုဖိုင်ကဲ့သို့သော အမျိုးမျိုးသော pvc ထုတ်ကုန်များကို ချည်နှောင်ရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။
PVC Additives များ ပါဝင်သည်။
Chlorinated Polyethylene၊ PVC Calcium နှင့် Zinc Stabilizer၊ Acrylic Processing Aids၊ Acrylic Impact Modifier (AIM)၊ PVC ထုတ်ကုန်များအတွက် Acrylic Processing Aid၊ AS Resin
1.Chlorinated Polyethylene အား ထိခိုက်မှုမွမ်းမံရန်အတွက်၊ တင်းကျပ်သော PVC ပရိုဖိုင်၊ ပိုက်များ၊ ပိုက်များ နှင့် အကန့်များအတွက် PVC ချောထည်ပစ္စည်းများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အားကောင်းစေရန်အတွက် အသုံးပြုထားပါသည်။
ရော်ဘာအတွက် Chlorinated Polyethylene (CM) ကို ရေခဲသေတ္တာ အလုံပိတ်အကွက်များ၊ သံလိုက်ကတ်များနှင့် စသည်တို့အဖြစ် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
မီးဒဏ်ခံနိုင်သော ABS ။
2. PVC ကယ်လစီယမ်နှင့် ဇင့်ဓာတ် တည်ငြိမ်စေသော၊ PVC အစေးလုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် ကောင်းမွန်သော မျက်နှာပြင်အထိ ရွေ့လျားသွားလာနိုင်စေရန် ကူညီပေးသည်။တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်သည်။ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
3. တောင့်တင်းသော PVC ထုတ်ကုန်များတွင် acrylic ပြုပြင်ခြင်းအကူအညီကို ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် ဆန့်နိုင်အား၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် မျက်နှာပြင် ချောမွေ့မှုကို တိုးတက်စေသည်။
4. PVC အတွက် Acrylic Processing Aid သည် gelation ကို အရှိန်မြှင့်ပြီး၊ အပူခံနိုင်မှု နှင့် သက်တမ်းတိုးနိုင်မှု၊ မျက်နှာပြင်နှင့် သေးငယ်သော အမြှုပ်အပေါက်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး ကြီးမားသော အပေါက်ထဲသို့ မပေါက်ကွဲစေရန်။
ရေပါသော ပလပ်စတစ်နှင့် ရော်ဘာဆေးသုတ်ခြင်း emulsion၊ Waterborne Wood Lacquer Emulsion၊ Waterborne Metallic Paint Emulsion၊ Waterborne Glass Paint Emulsion။
ကျွန်ုပ်တို့၏ emulsion အမျိုးအစားအားလုံးကို ပလပ်စတစ်နှင့် ရာဘာ၊ ဖန်၊ သတ္တု၊ သစ်၊ Acrylic သို့မဟုတ် ABS စသည်တို့အတွက် ပန်းချီကားများ၏ မူလပစ္စည်းအတွက် အသုံးပြုထားပြီး eco-friendly waterborne ဖြင့် ရေးဆွဲထားသည့် ပန်းချီများကို တောက်ပကြည်လင်မှု၊ မြင့်မားသော ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ သာလွန်မာကျောမှုတို့ဖြင့် ကျေနပ်စေရန်၊ ရေခံနိုင်ရည်၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့် adhesion ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဓာတုပစ္စည်းများကို ၂၂ နှစ်ကြာ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Weifang Dehua New Polymer Material Co.,ltd1999 နှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ အရည်အသွေးမြင့်ထိန်းချုပ်မှုစံစနစ်ဖြင့်ကြီးမားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတုစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး 2002 ခုနှစ်တွင် ISO 9001 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသည်။ထိပ်တန်းအဆင့် သုတေသနစင်တာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များနှင့် စမ်းသပ်ပစ္စည်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်တိုင်းကို တိကျမှန်ကန်စွာ ချက်ခြင်းဖြည့်ဆည်းရန် ကူညီပေးပါမည်။
အဲလစ်ဖုန်း- +86 17560619262
Maggie ဖုန်း-+86 13953660468
No.788 Minzhu လမ်း Hanting ခရိုင်၊ Weifang၊ Shandong၊China
© အခွင့်အရေးအားလုံး လက်ဝယ်ရှိသည်။
1k ဆေးဆိုတာဘာလဲ၊ 2K ဆေးဆိုတာဘာလဲ။
PVC ချောဆီ ပမာဏ ဘယ်လောက်...
PVC ချောဆီများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်...